Abantu baqala nini ukuthonya isimo sezulu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Yize bekulokhu kunezinguquko zesimo sezulu, kodwa lesi esibhekene naso manje sesiba sibi kakhulu ngenxa yomsebenzi wabantu. Bayanda kithi abahlala kuleplanethi encane eluhlaza okwesibhakabhaka, ngakho-ke ukufunwa… kwakho konke (ukudla, izindlu, njll.) Kuyanda. Konke lokhu inethonya elikhulu esimweni sezulu, okufudumeza ikhaya lethu ngokwengeziwe, ngenkathi iqhwa liyancibilika futhi ngaleyo ndlela libangele ukwanda kancane kodwa okuqhubekayo kolwandle.
Kodwa, Siqala nini ukwephula ibhalansi yesimo sezulu?
Eminyakeni yamuva, futhi ikakhulukazi eminyakeni eyi-16 yakamuva, amarekhodi abaluleke kakhulu okushisa aphuliwe. Manje, cishe njalo ngenyanga i-mercury ikhuphuka ngaphezu kokufanele. Noma kunjalo, ngokocwaningo olwenziwe yi-American Geophysical Union olushicilelwe kumagazini wesayensi i-Geophysical Research Letters, inkinga yavela ngo-1937. Ngalowo nyaka amazinga okushisa aphezulu ahlotshaniswa nokushintsha kwesimo sezulu. Kamuva kwavela ezinye, okungukuthi: 1940, 1941, 1943-1944, 1980-1981, 1987-1988, 1990, 1995, 1997-1998, 2010 nango-2014.
Abaphenyi babona ukuthi ukusetshenziswa okubanzi kwama-aerosols ezimboni kufihla ithonya abantu abanalo esimweni sezulu, ngoba kunomphumela wokupholisa. Kepha nomaphi lapho sibheka khona sizothola izimpawu zokuguquka kwesimo sezulu, okusenza sibe neplanethi eyanda ngokufudumala.
Ithimba lihlole izimo zezulu ezidlule ububanzi bokuhluka kwemvelo, futhi laphetha ngokuthi eminyakeni eyisithupha edlule sebeshayile amarekhodi abalulekile, ikakhulukazi e-Australia, njengoba isengxenyeni eseningizimu, maphakathi nolwandle, ihlala kude nomthelela wefriji yamazinga aphezulu ama-aerosols.
Ama-aerosols lapho kugcwele khona akhombisa ukushisa okwengeziwe, okubuyiselwa emkhathini, kepha kususwe ngokushesha emkhathini, ukufudumala kuyabuya. Lo mphumela ubonwe enkabeni yeYurophu, enkabeni ye-United States, e-East Asia, enkabeni yeNgilandi nase-Australia. Kuzo zonke lezi zifunda ngaphandle kwase-Australia, bekunezikhathi ezibandayo ngawo-70, mhlawumbe ngenxa yama-aerosols.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Abantu baqala nini ukuthonya isimo sezulu?